क्लीन फीडः नेपालमा प्रसारित केही विदेशी टीभी च्यानलमा अझै किन विज्ञापन आउँछ – Sulsule
क्लीन फीडः नेपालमा प्रसारित केही विदेशी टीभी च्यानलमा अझै किन विज्ञापन आउँछ
सुलसुले २०७७ पुस २७ गते १९:०७ मा प्रकाशित
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले विज्ञापन बोर्डका पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरूसँग आइतवार छलफल गरेका थिए ।
नेपालमा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने नियम लागु भइसके पनि विज्ञापन आउने क्रम नरोकिएका गुनासाबीच विज्ञापन बोर्डको कार्यालयले नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ तथा नियमावली २०७७ अनुसार गत कार्तिक ७ गतेदेखि विज्ञापनरहित (क्लीन फीड) प्रसारण लागु भएको थियो।
“उक्त कानुनी व्यवस्थाविपरीत प्रसारण नगर्न, नगराउन सम्बद्ध सबैमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ। अन्यथा कानुनबमोजिम कारबाही गरिने बेहोरा समेत सम्बद्ध सबैलाई जानकारी गराइन्छ,” बोर्डको कार्यालयद्वारा आइतवार जारी सूचनामा भनिएको छ।
यसअघि गत असोज २८ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कार्तिक ७ गतेभित्र विज्ञापनरहित प्रसारण नभएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने बताएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै अघिल्लो सरकारले २०७४ साल साउन १ गतेदेखि क्लीन फीड लागु गर्ने निर्णय गरे पनि तयारीका लागि भन्दै पछि स्थगित गरिएको थियो।
क्लीन फीडबारे ऐनमा के छ?
विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ६ (१) अनुसार नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित क्लीन फीड प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
दफा ६ (२) अनुसार उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्नेछ।
दफा ६ (३) अनुसार नेपालका सञ्चारमाध्यमले विदेशी विज्ञापनलाई डबिङ गरी प्रसारण गर्न पाउनेछैनन्।
यो ऐन लागु भएको गत कार्तिक ७ गते नै एक वर्ष पूरा भइसकेको छ।
केबल टेलिभिजन महासङ्घ के भन्छ?
केबल टेलिभिजन महासङ्घले सरकारी नीतिअनुसार क्लीन फीड लागु गरिसकिएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
“हामीले त क्लीन फीड लागु गरिसक्यौँ। कतिपय विदेशी च्यानलबाट विज्ञापन आउने गरेका गुनासा हामीले पनि सुनेका छौँ। नियमन गर्ने त सरकारले हो,” नेपाल केबल टेलिभिजन महासङ्घका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बीबीसीसित भने।
कतिपय केबल सञ्चालकले सरकारलाई नटेर्दा पनि पूर्ण रूपमा क्लीन फीड लागु नभएको हुनसक्ने उनको दाबी छ।
“यसमा नियमन गर्ने निकाय र केही सञ्चालक दुवैको गल्ती देख्छु म,” पराजुलीले थपे।
कारबाहीबारे बोर्ड के भन्छ?
ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावली वा मापदण्डविपरीत कसैले विज्ञापन गरेको पाइएमा बोर्ड अथवा त्यसमातहत रहेका समिति वा स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
ऐनको दफा २५ (३) (ख) अनुसार क्लीन फीड लागु नगर्ने तथा विदेशी विज्ञापनलाई डबिङ गरी प्रसारण गर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ।
क्लीन फीड लागु भइसके पनि कतिपय च्यानलबाट विज्ञापन नरोकिएको कतिपय सेवाग्राहीले सामाजिक सञ्जालमामार्फत् पनि गुनासो गर्दै आएका छन्।
बोर्डका अध्यक्ष डिल्लीराम शर्मा आफूहरूको अनुगमन समिति तथा कतिपय पत्रकारबाट पनि त्यस्तो गुनासो आएपछि आफूहरूले पछिल्लो सूचना जारी गरेको बताए।
त्यसको पालना नगरिएको खण्डमा गरिने कारबाहीबारे बीबीसी न्यूज नेपालीसित उनले भने, “विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा कसुर र सजायबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ।”
“प्रचलित ऐन, कानुनलाई सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। नमानेको खण्डमा हामीले विधिसम्मत/कानुनसम्मत कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ।”
गत महिना सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले काठमाण्डूको बबरमहलस्थित विज्ञापन बोर्डको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए।
विज्ञापनको क्षेत्रमा देखिएका विकृति-विसङ्गतिको अन्त्यका लागि बोर्डको गठन गरिएको भन्दै उनले उक्त दिन मन्त्रालय र बोर्डका लागि ‘ऐतिहासिक’ भएको दाबी गरे।